भोलि देखि यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ विक्री खुला,कति कित्ता आवदेन दिने ?
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ भोलि असार २४ गतेबाट निष्कासन हुँदैछ। कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत रकमबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ।
आजदेखि युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुल्ला,कति कित्ता आवेदन दिँदा ठिक ? यो हेर्नुहोस् https://vibesnepal.com/5866.html
इन्स्योरेन्सले निष्काशन गर्न लागेको कुल ६४ लाख कित्ता शेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख २२ हजार ५०० कित्ता कर्मचारीहरुलाई र अर्को ५ प्रतिशत सामूहिक लागनीकोषहरुलाई सुरक्षित गरेको छ।सर्वसाधारणले बाँकी ५८ लाख ५ हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।